Samaynta iyo daraasadaha waa degel asal ahaan ka soo jeeda 2010 kaas oo ujeedkiisu yahay in akhristayaashiisa lala socodsiiyo wixii ugu dambeeyay wararka, isbeddelada iyo wicitaanada ee nidaamka waxbarashada. Inta badan mucaaradka iyo mawduucyada jaamacadaha iyo dugsiga, laga bilaabo sida loo fuliyo hanaan maamul oo gaar ah ilaa ilaha iyo tilmaamaha ardayda.
Waxaas oo dhami waa suurtagal mahadsanid kooxdayada tifaftirka ee aad hoos ka arki karto. Haddii aad rabto inaad ka mid noqoto kooxdan, waad nala soo xiriiri kartaa Halkan. Dhinaca kale, gudaha boggan Waxaad ka heli kartaa dhammaan mawduucyada aan ku soo qaadnay boggan sannadihii la soo dhaafay, oo loo kala soocay qaybo.
Qalinjabinta iyo Dhaqtarka Falsafadda ee Jaamacadda Navarra. Koorso Khabiir ku ah Tababarida Dugsiga 'Escuela D´Arte Formación'. Qorista iyo falsafada ayaa ka mid ah xirfadeyda xirfadeed. Iyo rabitaanka ah inaan sii wado barashada, iyada oo loo marayo baaritaanka mowduucyada cusub, ayaa maalin walba ila socda.
Barashadu ma dhacdo, laakiin taa beddelkeeda waxay kuu oggolaaneysaa inaad joogto halkaad rabto. Sababtoo ah tababar wanaagsan wuxuu furaa dhammaan albaabada aad rabto. Marna kama habsaan in waxbarashada la sii wado! Sababtaas awgeed, barnaamijka FormaciónyEstudios waxaan rabnaa inaad ku guuleysan karto himilooyinkaaga oo dhan aqoon wanaagsan.
Waxaan marwalba xiiseynayay tababarka xirfada iyo hagista (FOL) shaqadayda waxaan soo maray maadooyin laxiriira tan. Intaa waxaa dheer, barashada farsamooyinka barashada waa wax soo jiitay indhahayga, gaar ahaan in carruurta la baro inay wax bartaan.
Guridda '84, dameer aan nasan oo kursi xun leh iyo dhadhan badan iyo hiwaayado badan. Ku-cusbooneysiinta koorsooyinka waa mid ka mid ah waxyaabaha aan mudnaanta siinayo: waligaa ma joojinaysid barashada. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo horumariyo waxbarashadaada? Qoraaladayda waxaad ka heli doontaa talooyin badan oo, waxaan rajeynayaa, inay kaa caawin doonaan inaad horumariso tababarkaaga.